Navoakan'ny Manampahefana fizahan-tany any Guyana ny drafitra "Safe for Travel"
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Guyana » Navoakan'ny Manampahefana fizahan-tany any Guyana ny drafitra “Safe for Travel”
Vaovao Mafana Guyana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Karaiba • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Hospitality Industry • Vaovao • fanorenana • tompon'andraikitra • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Tsiambaratelo momba ny dia • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Navoakan'ny Manampahefana fizahan-tany any Guyana ny drafitra “Safe for Travel”
Febroary 9, 2021
Ny tanjon'ity tetik'asa ity dia ny fiarovana ireo faritra tena voakasik'izany sy mora tohin'ny areti-mifindra COVID-19 ary koa hiantohana ny fahasalamana sy ny fiarovana ireo mpandeha.
Drafitra vaovao hanokafana ny fizahantany ary hiantoka ny fiarovana hatrany ny vondrom-piarahamonina sy ny mpandeha
Hery-miasa COVID-19 nasionaly hanombanana ny asa fizahan-tany
Ny fisokafana indray dia ao amin'ny dingana fahatelo izay nahitana ny fanitarana ny sidina ara-barotra
Ny manam-pahefana fizahan-tany Guyana (GTA) dia nandefa fandefasan-kafatra marketing vaovao mifandraika amin'ny fizotrany fanaraha-maso nohavaozina noho ny COVID-19 mitondra ny lohateny hoe "Safe for Travel" izay mahita ny vondrona fizahan-tany, nomen'ny fahefana nataon'ny National Task Force COVID-19, hanombana orinasam-pizahan-tany mba hahazoana antoka fa miasa ao anatin'ny National izy ireo Covid-19 Fepetra fandriam-pahalemana an-gazety sy amin'ny toerana ahafahana mandray ny fiverenan'ny dia an-trano sy iraisam-pirenena. Ny tanjon'ity tetik'asa ity dia ny hiarovana ireo faritra tena voakasik'izany sy mora tohin'ny areti-mifindra COVID-19 ary koa hiantohana ny fahasalamana sy ny fiarovana ny mpandeha eo an-tsaina hatrany satria ny toerana misokatra dia misokatra indray amin'ny fizahan-tany.
Ho valin'ny virus coronavirus dia nofoanan'ny Governemantan'i Guyana ny sidina mpandeha iraisampirenena rehetra nanomboka ny 18 martsa 2020, na izany aza, ny manampahefana sivily sivily Guyana dia nanomboka ny fomba fanokafana miandalana. Ireto misy antsipiriany momba ireto:
Phase 1 - 18 martsa - 11 oktobra 2020: sidina fampodiana.
Phase 2 - 12 Oktobra 2020: sidina ara-barotra voafetra ho an'ny olom-pirenena gyanianina, mponina maharitra, mpitsangatsangana iraisam-pirenena, mpiasa iraisam-pirenena ary diplomaty.
Phase 3 - Novambra 2020 (amin'ny toerany hatramin'ny Janoary 2021): Fanitarana ny sidina ara-barotra miditra izay mamela ireo teratany vahiny sy mpandeha iraisam-pirenena hiditra ao Guyana.
Phase 4 - TBC: Fanitarana ny sidina miditra sy mankany ivelany mba hanomezana tolotra bebe kokoa ho an'ireo mpizahatany miditra sy ivelany.
Tamin'ny volana janoary 2021, ity fisokafana ity dia ao amin'ny dingana fahatelo izay nahitana ny fanitarana ny sidina ara-barotra izay mamela ny teratany vahiny sy ny mpizahatany iraisam-pirenena hiditra ao Guyana. Miaraka amin'izany ny risika mety hiparitahan'ny viriosy avy amin'ny mpitsidika any amin'ireo vondrom-piarahamonina marefo indrindra any Guyana ao amin'ny firenena iray izay nahita tahan'ny tranga ambany indrindra tamin'ny areti-mandringana.
Mba hiarovana ireo vondrom-piarahamonina ireo sy ny mponina amin'ny ankapobeny, ny mpandeha any Guyana dia takiana hanolotra fanadinana PCR ratsy avy amin'ny laboratoara nahazo fankatoavana. Ny fitsapana ratsy avy amin'ny 72 ora aorian'ny fahatongavanao dia havela handalo amin'ny seranam-piaramanidina. Na izany aza, raha atao ao anatin'ny efatra ka hatramin'ny fito andro fitetezana ny fitsapana PCR dia takiana ny mpandeha hanao fitsapana PCR hafa rehefa tonga any Guyana izy ary maneho fitsapana ratsy. Marihina fa raha takiana ny mpandeha hanao fitsapana any Guyana, dia ho lany amin'ny vidiny GY $ 16,000 (eo amin'ny £ 56) izany.
Ny paikady 'Safe For Travel' dia napetraka ho fepetra fanampiny hiarovana ny vahoaka gyanianina, ao anatin'izany ny vondrom-piarahamonina marefo, ary ny mpandeha. Ny orinasan'ny fizahantany dia tombanana amin'ny fomba dingana roa. Voalohany, tsy maintsy mandefa ny Standard Operating Procedure (SOP) amin'ny antsipiriany izy ireo amin'ny fomba nanitsian'ny orinasa ny fomba fanaony ary nandray fepetra vaovao hisorohana ny fiparitahan'ny COVID-19. Vantany vao natolotra ny SOP, ny GTA dia hanao fanaraha-maso ny orinasa mba hahazoana antoka fa mahafeno ny mason-tsivana toy izao izy ireo:
1.Signage (fanasana tanana, fanaovana maska ​​ary fanalavirana ny fiaraha-monina)
2. Fanaraha-maso ny toetr'andro (fanaraha-maso ny mari-pana momba ny mari-pana thermometer)
3.Sanitisation - fomba fanao sy vokatra ampiasaina
4. fiarovana ny fiarovana
5. Fiarovana fiarovana
6. Fanaraha-maso - ahoana ny tetikasan'ny orinasa hanaraha-maso ny fahombiazan'ny SOP
Raha vao nisy ny fizahan-tany momba ny fizahan-tany ary heverina fa mifanaraka amin'ny COVID-19 nataon'ny GTA sy ny National COVID-19 Task Force, dia omena ny fankatoavana ny orinasa mba hanomboka hiasa indray.
Ho fanampin'ireto fepetra vaovao ireto, ny GTA dia afaka nanolotra fonosana fanampiana COVID-19 ho an'ireo vondron'olona vazimba teratany mifamatotra amin'ny rojom-bidin'ny fizahan-tany teo am-piandohan'ny valanaretina. Ny vondrom-piarahamonina izay mavitrika amin'ny fizotran'ny fizahantany fizahan-tany sy ny fiaraha-miasa amin'ny GTA dia nahazo tombony tamin'ny fonosana izay misy ny vokatra fanadiovana sy fanadiovana Ecolab, thermometre infrared, lamba ary fanjairana ho an'ny famoronana saron-tava, sprayers knapsack mba hamonoana otrikaretina trano sy valizy sns. COVID19. Ho an'ireo vondrom-piarahamonina tsy mandray anjara mavitrika amin'ny fizahan-tany, ny fonosana dia misy ny vokatra fanadiovana, lamba ary fanjairana fanjairana amin'ny famoronana sarontava sy famantarana amin'ny COVID-19. Ireo fonosana fanohanana dia natolotra tamin'ny alàlan'ny fotoam-panofanana iray nataon'i Ecolab sy ny solontenan'ny Ministeran'ny Fahasalamana ary koa ny GTA.